Waalidiinta oo ka welwelsan sakhradda xafladda Valborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gacmo dhalooyin khamri ah isku dhufsaneya. sawir: FREDRIK SANDBERG / TT
Waalidiinta oo ka welwelsan sakhradda xafladda Valborg
Is-bedel ayaa u dhexeeya sidii horay loogu xafladeeyn jirey iyo iminka
La daabacay fredag 28 april 2017 kl 08.30
Xafladda Valborg ayay dad badani la xiriiriyaan sakhrad. Halka uu saddexdii waalidba mid ka welwel-san yahay iney dhallaankooda dhowr iyo toban jirka ahi wax-yeello kala soo gudboonaato sakhrad darteed.
Baaris la sameeyey ayaa lagu ogaadey inuu kor u kacay welwelka ey waalidiintu ka qabaan in dhallaankooda ey wax-yeelooyin ka soo gaaraan muddada lagu guda jiro xafladda Valborg, xafladdaasina oo la caadeeystey in aad loo sakhraamo. Baaristaasina oo uu sameeyay ururka lagu magacaabo IQ.
58 boqolkii waalidiintii wax laga weeydiiyey ayaa sheegey iney ka welwel qabaan, halka ay tiradaasi ka ahayd 48 boqolkiiba sannadkii tagay.
Sida lagu xaqiijiyay baarista ururka IQ iney siddeed tobankiiba waalidiintu u arkaan inay caadi tahay in da’yartu khamri cabaan, hase yeeshee ey 9% aamin-san yihiin ilmahoodu iney khamriga cabaan xilligaa.
"In waalidiintu ka tallaaba qaadaan iyaga oo u barbar-dhigaya xilligii ey da’daa jireen kolka ey ilmahooda kala hadleyaan khamriga ayaan wanaag-sanayn marar badan. Waxaa is bedelay wakhtiga iyo sida ey dhallin-yartu khamriga u cabaan intaba. Tusaale ahaan waxaa maanta aad u sahlan in khamri lagu helo aaladda bulshadu ku kulanto, waana mid loo baahan yahay iney waalidiintu isha ku hayaan, sida uu sheegay Juan-Pablo Roa, agaasimaha guud ee ururka IQ.
Baarista ururka IQ waxay sidoo kale muujineeysa farqiyo ballaaran ee u dhexeeya gobollada kala duwan ee dalku ka kooban yahay.
92% waalidiin dhallaanka aan qaan-gaarin ku haysta magaalada Uppsala waxey aamin-san yihiin iney khamriga cabbaan inta lagu guda jiro xafladda Valborg. Gobolka Kronoberg ayey sidaa amin-san yihiin tiro gaarsii-san 66%.
Baarista ayaa lagu wareeystey waalidiin gaarsii-san qiyaastii 3 000 oo leh dhallaan da’doodu u dhexeeyso 13-17 jir oo ku dhaqan gobollada dalka dhammaantood.
Dhaqan soo jireen ah
Xafladda Valborg ayaa ku beegan maalinta ugu dambeeysa ee bisha abriil ee sannad walba. Waxaa laga xusaa waddammo ey ka mid yihiin Estland, Litaawen, Latvia, Finland, Sweden, Slavenia, Jekia iyo Jarmalka.
Xafladdana ayaa ka soo jeedda dalka Jarmalka caadooyinkii ka horreeyey diinta, hase yeeshee goor dambe lala xiriiriyey gabadha owliyadda Valborg.